Njem na-ekpo ọkụ: Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị America na-eme atụmatụ ezumike oge ezumike
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Njem na-ekpo ọkụ: Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị America na-eme atụmatụ ezumike oge ezumike
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Ụgbọ ala mgbazinye • Caribbean • Ịtụ egwu • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • Rail njem • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
A na-eme ndị America jiri ezumike dị jụụ ma nọrọ naanị ha n'ụlọ ha; ọ na-atọ ha ụtọ ịpụ na-aga
Njem na-alaghachi ezigbo azụ
Millennials bụ ndị kasị nwee obi ụtọ ịlaghachi ebe ahụ na imirikiti nke ọgbọ na-eme atụmatụ njem
Agbanyeghị na ọtụtụ ndị America ka na-eme atụmatụ ịkwọ ụgbọala ebe ha na-aga, 19% na-eme atụmatụ ife efe, elu 4% site na mmiri a
N’oge ọkọchị dị n’akụkụ, ọ bụghị naanị ihu igwe na-ekpo ọkụ. Ndepụta njem njem nke 2021 na-ekpughe na - na ụbọchị ọ bụla - njem na-eweta nnukwu mbịaghachi. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị America (43%) n'ime nnyocha e mere na nso nso a kwenyere na ọrụ njem ga-alaghachi n'ime ọnwa atọ. Ebe ndị America anaghị edozizi maka ezumike na njem obodo, ọ dị ka ezigbo ezumike ezumike na-abịa n'azụ.
Ihe karịrị ụzọ abụọ n’ụzọ atọ nke ndị America (67%) na-eme atụmatụ njem oge ọkọchị a (June 1 - August 31), nke bụ ịrị elu 17% site na ndị gara njem oge opupu ihe ubi a (Machị 1- Mee 31). Millennials bụ ihe kachasị nwee ọ toụ ịlaghachi ebe ahụ na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu (72%) nke ọgbọ na-eme atụmatụ njem. Agbanyeghị na ọtụtụ ka na-eme atụmatụ ịkwọ ụgbọala gaa ebe ha na-aga (43%), 19% na-eme atụmatụ ife efe, elu 4% site na mmiri a.
A na-eme ndị America jiri ezumike dị jụụ ma nọrọ naanị ha n'ụlọ ha; ọ na-atọ ha ụtọ ịpụ na-aga. E jiri ya tụnyere izu mbụ nke ọnwa Jenụwarị, nyocha ụlọ nkwari akụ dị elu 65%, ọchụchọ maka ahụmịhe (nlegharị anya na njegharị) mụbara site na 78%, nyocha ụlọ oriri na ọ restaurantụ areụ bụ 53%.
Kedu ihe na-ekpo ọkụ n’oge ọkọchị a?
N'ime ndị na-eme atụmatụ njem, 74% nke ndị America ga-eme njem ụlọ ma 13% ga-aga mba ụwa.
Ndị America dị njikere maka ogologo R & R, na 29% na-eme njem izu ụka na 28% ezumike maka ụbọchị 10.
Izu njem ndị kacha ewu ewu na-amalite na June 21 na June 28, gbara gburugburu aroundbọchị Mwere Onwe.
Oge ezumike: Ihe karịrị ọkara (53%) nke ndị America na-eme atụmatụ itinyekwu ego na njem afọ a na oge ikpeazụ, na-arị elu na 66% maka puku afọ. N’ụwa nile, ndị America bụ ndị na-emefu ego karịa oge ọkọchị, na-eme atụmatụ iwepụ 9% karịa nkezi ndị njem gburugburu ụwa.
Ihe eji enyere ndụ aka kachasị mma: Hichaa họtel, ọrịa kansa, ụlọ oriri na ọ withụ withụ.
Ebe ndị osimiri na-aga n'ihu na-enwu n'oge okpomọkụ a, ndị njem nwere mmasị na anwụ na-acha Florida na Mexico. Nhọrọ ha ebe ha ga-anọ na-ekwughachi ọchịchọ ahụ: ụdị ebe obibi ndị kachasị ewu ewu maka njem ezumike nke 2021 bụ ihe niile na ebe ntụrụndụ osimiri.